Akụkọ - ZPMC akpa akpa ruru stacker dị ebe a
ZPMC akpa abụọ ruru stacker dị ebe a
N'oge na-adịbeghị anya, Shanghai Port Machinery Heavy Industry ewepụtala onye na-agbasa igbe nwere okpukpu abụọ nke nwere ike imeghari n'usoro ụlọ ọrụ zuru oke nke iru stacker dabere na ọkọlọtọ otu-akpa ruru stacker.
Ogwe igbe nwere okpukpu abụọ nwere ọmarịcha nhazi na nhazi usoro. Ọ nwere ike bulie igbe ọkọlọtọ 20-ụkwụ ma ọ bụ 40-ụkwụ n'otu oge, wee nwee ike tojuo ụlọ nke 9. Ibu ibu kachasị bụ tọn 10, nke karịrị stackers nkịtị. A na -amụba arụmọrụ mgbanwe nke ngwaahịa a karịa 40%, nke nwere ike zute mgbanwe akpa efu, ịkpakọba, yana nchekwa na ntụkwasị obi.
Site na mmụba nke ngwa lọjistik ọdụ ụgbọ mmiri na mmụba nke njikwa ụgbọ okporo ígwè, ojiji nke arịa na -agbasawanye ebe niile, ahịa maka ijikwa akụrụngwa abawanyela. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ anatala ọtụtụ iwu mbupụ maka akpa nwere ike ibute akpa abụọ, wee mezue mbupu otu akụrụngwa.
Ndị na -ahụ maka akpa bụ otu n'ime igwe kachasị mkpa ejiri rụọ ọdụ ụgbọ mmiri, na yad. Ọ nwere ike melite ịrụ ọrụ nke ọma nke arịa na -agagharị agagharị, a na -etinye ọtụtụ akpa efu n'otu saịtị, mana onye njikwa akpa efu nwere ike ibuga ha n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Ọ bụghị naanị ihe njikwa akpa efu, kamakwa stackers nwere ike ịbụ ma igwe dị mkpa maka ọrụ njem akpa.
Amachibidoro ọrụ nke akpa akpa stacker
Amachibidoro ịrụ ọrụ akụrụngwa n'okpuru ọnọdụ ndị a:
Ebe nchekwa ọ bụla etinyere na stacker enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma. Dịka ọmụmaatụ: nnukwu ọkụ ihu, enyo enyo, ihe ngosi na -arụ ọrụ na -arụ ọrụ, ịtụgharị mkpọtụ, wdg.
Bra Breeki, gia steering, ihe eji arụ ọrụ na akụrụngwa ndị ọzọ adịghị mma.
Iwu ihe njikwa ihe mkpofu efu
Tupu ịmalite, lelee ma gosi na onweghị onye nọ na akụrụngwa na ahịrị na -agba ọsọ. ⑥ Mgbe igwe nwere mkpu ọ bụla, amachibidoro ịmalite injin ka ọ rụọ ọrụ. A ghaghị ịchọpụta ihe kpatara mkpu na enwere ike wepu mkpu tupu enwee ike malite injin.
Mgbe etinyere lever gear na -anọpụ iche, enwere ike ịmalite injin ahụ, ma ọ bụghị mmalite ahụ adịghị mma.
⑧ Hụ na onweghị onye na -eje ije ma ọ bụ na -eguzo n'okpuru onye na -agbasa agbasa (ma ọ nwere ibu na -ebuli ibu), na enweghị onye a na -ahapụ n'azụ ibu mgbe ọ na -arụ ọrụ, ma ọ bụghị, agaghị ekwe ka ọ rụọ ọrụ azụ.
Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ ga -elerịrị anya ka ọ na -aga njem ma lebara anya nke ọma ebe ndị mmadụ ma ọ bụ ụgbọ ala ndị ọzọ nwere ike ịpụta. Ọ bụrụ na ibu na -emetụta ebe nlele, onye ọkwọ ụgbọ ala ga -akwọrịrị ụgbọala ahụ na ntụgharị.
Amachibidoro ịkwaga ndị mmadụ na mpụga tagzi ma ọ bụ na ibu. Naanị n'ime ụgbọ ala